ဘုရား Archives - Myitter
နေ့စဉ် အလုပ်သွားနေရ၍ အချိန်မရ သူများအတွက် ဘုရားတရားကို မည့်သို့ပြုလုပ်ရန်
နေ့စဉ်အလုပ်သွားနေရ၍ အချိန်မရသူများအတွက် ဘုရားတရားကိုမည့်သို့ပြုလုပ်ရန် နေ့စဉ်အလုပ်သွားနေရ၍ အချိန်မရလို့ ဘုရားတရားမလုပ်နိုင်ပါဟု ပြောလာသူများအတွက်ပါနံနက် မိမိမူလအိပ်ရာထချိန်ထက် နာရီဝက် စော၍ ထပါ ငါးပါးသီလ ခံယူပါ မိမိအဆင်ပြေရာ ဂါထာတစ်ခုခုကို ပုတီး စိတ်ပါ ပရိတ်တော်များအားလုံး မရွတ်ဖတ်နိုင်လျင် မိမိအဆင်ပြေရာသုတ်တစ်ခုသာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ ည အလုပ်မှပြန်လျင် ည 9နာရီနောက်ပိုင်း […]
” အစွမ်းထက်သော ဘုရား မျက်နှာသစ်ရေတော် ကျင့်စဉ်ကပ်နည်း ”
February 11, 2020 Myitter 0
ဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကို နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဆက်ကပ်ရန် ဖြစ်သည်။ ဆက်ကပ်သောအခါ မိမိမျက်နှာသစ်သည့်ရေ ကိုပင် ကပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ ၏ နှုတ်မှ ဖြစ်စေ.. ” ဘုရား တပည့်တော်သည် အေးမြကြည်လင် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သော ဤ မျက်နှာသစ်တော် ရေ ကို […]
” အစွမ်းထက်သော ဘုရား မျက်နှာသစ်ရေတော် ကျင့်စဉ်ကပ်နည်း ”….
အစွမ်းထက်သော ဘုရား မျက်နှာသစ်ရေတော် ကျင့်စဉ်ကပ်နည်း ဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကို နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဆက်ကပ်ရန် ဖြစ်သည်။ ဆက်ကပ်သောအခါ မိမိမျက်နှာသစ်သည့်ရေ ကိုပင် ကပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ ၏ နှုတ်မှ ဖြစ်စေ.. ” ဘုရား တပည့်တော်သည် အေးမြကြည်လင် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သော […]
” ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်းအကျိုး မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ပါ ”အများအတွက်လည်း မျှဝေပေးခဲ့ပါ …..
“ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်းအကျိုး ဖတ်ပြီးရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ” တစ်ခါတော့…ဘုရားရှင်ဟာ နံနက်မိုးသောက်ထတဲ့အချိန်မှာမဟာကရုဏာသမာပတ်ဝင်စားရင်း စဏ္ဍာလတင်းကုပ်မှာနေတဲ့ သက်တမ်းကုန်နေတဲ့အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို သွားမြင်တော်မူပါတယ်သူ့နာမည်က စဏ္ဍာလီတဲ့။ စဏ္ဍာလီ အမည်ရှိတဲ့ အဘွားအိုဟာ အခုမနက်ခင်းမှာပဲ သေတော့မယ် ပြီးတော့ ဘာကုသိုလ်မှလည်း မရှိတဲ့အတွက်ငရဲလည်း ကျမယ်တဲ့။ ငရဲမကျစေချင်တဲ့အတွက် ဘုရားရှင်ဟာသံဃာပေါင်းများစွာခြံရံပြီးရာဇဂြိုဟ်မြို့ထဲကို ဆွမ်းခံကြွတော်မူပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အဘွားအိုကလည်း […]
အရေးကြုံလာရင် စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် လမ်းစဉ်အတိုင်း တရားထိုင်ခြင်းပြုလုပ်ရတဲ့ ”အမေရိကန် မရိန်းတပ်သားများ” ….
မရိန်းတပ်သားတွေဆိုတာဟာ ကမ္ဘာ့အမာဆုံးတပ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပြည့်ဝဖို့အတွက် တရားထိုင်ခြင်းတွေ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ရပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းဟာ မရိန်းတပ်သားတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပိုမိုအားကောင်းစေပြီး လေ့ကျင့်မှုတွေမှာလည်း ရလဒ်ကောင်းတွေပိုမိုထွက်ရှိလာကြောင်းတွေ့ရှိပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတွင်းစိတ်အေးချမ်းစေဖို့ လုပ်ဆောင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အီရတ် နဲ့ အာဖဂန်မှာ တိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာ စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေကြောင့် စိတ်မအေးချမ်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် မရိန်းကော်ပိုရေးရှင်းဟာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်အေးချမ်းစေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကိုတော့ […]
” မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ် ” လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ….
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ […]
” မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်အား ကိုးကွယ်ရန် စတင်ဖြစ်တည်လာရခြင်းအကြောင်း ”
January 22, 2020 Myitter 0
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်အားကိုးကွယ်ရန် စတင်ဖြစ်တည်လာရခြင်းအကြောင်း ယနေ့မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ ဘုရား ရှင် ၏ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များကို တွေ့မြင်ဖူးမျှော်နေရသည်ဖြစ်၏။ အ ချို့အချို့သော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများကဘု ရားရှင်သည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီဖြစ်၍ဘုရားရှင်နဲ့အတူတန်ခိုး တော်များရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ရာစေတီတော်များရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များကိုရှိခိုးပူဇော်ခြင်းသည်အကျိုးမရှိဟုဆိုကြ၏။ လွန်စွာမှဓမ္မအန္တရာယ်ကြီးလှစွာသောအ ယူအဆ‌ဖြစ်‌ပါတယ်။ ဘုရားရှင်၏ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များကိုပူဇော်ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်စပ် လျဉ်း၍ဘုရားရှင်သက်တော်ထင် ရှားရှိခဲ့စဉ်အခါကဘုရားရှင်သည် သာဝတ္ထိပြည်မွန် ဇေတဝန်ကျောင်း တော်၌ သတင်းသုံးတော်မူ စဉ်ကဖြစ်၏။ […]
”ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျလာနိုင်သည်ဟု နိမိတ်မကောင်းကြုံတဲ့အခါ ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါ”
January 16, 2020 Myitter 0
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးများအတွက် ဝမ်းသာစရာ ပြင်ဆင်မှုများ . မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ အားလုံးခံစားစေနိုင်ဖို့အတွက်မျှဝေတာပါ . နှစ်ပေါင်းများစွာကကြားခဲ့ရတဲ့။တည်းခိုဆောင်အခန်းဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စ။ အရင်တုံးက ဈေးပြိုင်စံနစ်နဲ့ ။ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က လေလံပြစ်တယ်။‌ လေလံစွဲယူတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေ အပြိုင်စွဲကြတော့ ဈေးတွေက အဆမတန်မြင့်သွားကြတော့။ သူတို့ကိုက်အောင် (အမြတ်အစွန်းရအောင်)‌ အခန်းခတွေဈေးတင် ။ အခန်းခက တွေဈေးကြီးတော့တာပေါ့။ […]